ကဒါဖီ တကောင် သေတယ်
ကိုကြီးကျောက် လည်း သေတယ်..
ဂျပန်မှာ လည်း သေတယ်
တာလေ မှာလည်း သေတယ်
နာဂစ် မှာ လည်း သေတယ်
အီဂျစ်မှာ လည်း သေတယ်
စစ်တိုက်တဲ့ သူတွေ သေတယ်
အိမ်ထဲမှာ နေတဲ့ သူတွေလည်း သေတယ်..
သာမန်ထက် လွန်တဲ့ လူတွေလည်း သေတယ်...
လူယုတ်တွေ လည်း သေတယ်
( ဒါပေမဲ့ တော့..အချိုးအစား မမျှဘူးပေါ့)
ချစ်တတ်သူ တွေ သေသလို
အချစ်တွေ လည်း သေတယ်...
စမ်းချောင်းလေး တစင်း က သံဝေဂ ရတယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ သံသယ ကလည်း လှ တယ်
But kindness remains.
Monday2May 2011, 12:08 pm.
ဟုတ်တယ်။ သံဝေဂ ရစရာပါပဲ။ ဘာမှ မမြဲတဲ့ တရားသာလျှင် မသေဘဲ တည်မြဲတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရာဇ၀တ်ကောင်တွေ၊ အာဏာရှင်တွေ သေတာတော့ လူပီပီ ပျော်မိတယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေလဲ မျှော်မိတယ်။ :P
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာလေး . . .
တခါတလေတော့လေ.....သေခြင်းတရားဟာ မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတယ်တောင် ထင်မိရဲ့...။ သက်ရှည်လို့ ဘုန်းမကြီးဆိုပေမဲ့ ဘုန်းကြီးတဲ့သူတွေ၊ ချစ်ခင်သူတွေကို အသက်ရှည်စေချင်မိတယ်။ တို့ကပဲ ဘက်လိုက်တတ်နေတာများလား မသိပါဘူး ကေရယ်.....
အမှန်တရားတွေ စုစည်းထားတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပါပဲ...
ထူးခြားဆန်းကြယ်ပေမဲ့ လှပနေတဲ့ ကဗျာလေး နှစ်ပုဒ် တွဲထားပေးခဲ့ပါတယ်..
So .. where shall we go.
မသိလို့မေးတာလား သိရဲ့ နဲ့မေးတာလား ... စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်း ဆိုကြည့်တာ .. မကေ
မူရင်းက ကဒါဖီ တကောင် သေတယ်လို့ရေးထားပါတယ် အမှန်တကယ်မသေသေးလို့
ကျတော်ကတော့ ကဒါဖီ တကောင် သေဖို့ကျန်သေးတယ်
လို့ပြင်ရေးမိပါတယ် မKရေ ခွင့်မတောင်းပဲပြင်မိတာတောင်းပန်ပါတယ်။